China ukukhuthaza ukuqina & ezokungcebeleka umkhakha - China Tianjin Shengxin Ezemidlalo Izimpahla
China ukukhuthaza ukuqina & ezokungcebeleka umkhakha
UMkhandlu State ikhiphe uhlelo ukuthuthukisa ukuqina umkhakha ezokungcebeleka, ukusetha umgomo ukwandisa okukhiphayo kwemkhakha ezingaphezu kuka 3 trillion yuan ($ 442.5 bhiliyoni) ngo-2025.
Ngaleso sikhathi, isimo semvelo enempilo izokwakhiwa, nge enengqondo umkhakha isakhiwo, ukuthengisela acebile imikhiqizo ukuqina kanye izindawo, funa ephakeme ukusetshenziswa nangaphezulu inkonzo abafanelekayo, ngokuvumelana nencwadi engokomthetho ezikhishwe Oct 28.
It ngokuthi yokuthuthukisa ukuqina nokungcebeleka uhlelo service kuleli zwe ngokuhlakulela imisebenzi yansuku zonke isikhathi sawo esiningi kwezemidlalo ongaphandle, kanye nemidlalo ezinezici kwamasiko, ukuthuthukisa ezemidlalo nezokuvakasha, futhi zokuhlanganisa Inthanethi Plus nge ukuthuthukiswa imboni.
Daily ukuqina ezemidlalo, ezifana ibhola, basketball, volleyball, ping-pong, ithenisi kanye ukugijima, kufanele olunye bagqugquzela futhi yawenza, wathi idokhumenti. Amanye ukuthuthukiswa ongaphandle kanye imfashini ezemidlalo futhi kufanele speeded up, kuhlanganise ebusika, izintaba, amanzi ezemidlalo, motor ezemidlalo, Equestrian kanye igalofu. I ezemidlalo ezinezici kwamasiko, efana kung fu, dragon isikebhe futhi ibhubesi ukudansa, zifakwe ohlelweni.
Loluhlelo Wanxusa ukuthuthukisa ezemidlalo ezokuvakasha futhi ulekelele ukuthuthukiswa umkhakha nge ubuchwepheshe, ezifana inthanethi, Big Data futhi ngamafu.
Ngokwazi ukuhlakulela abadlali emakethe embonini ikhathazekile, plan wathi ukuqina nokungcebeleka corporations kanye nezomphakathi kufanele ikhuthazwe ukuthi ukwandisa amabhizinisi, futhi abanye izinga lemikhiqizo Chinese bayakhuthazwa afune usizo okuningi kusuka capital emakethe - ezifana nokwenza Ipo wokukhipha izibopho - ukuze sithuthukise ekukwazini kwabo ukuncintisana ngamazwe futhi babe lomhlaba corporations.
Kudinga ku neziphathimandla zendawo ukuze usethe incubator ezisekelweni ukusekela zokuqala igxile ukuqina nokungcebeleka, ikakhulukazi labo abadlali umhlala phansi umkhankaso. Ngaphezu kwalokho, izinhlangano zezemidlalo nongovernment zikhuthazwa ukuba nazo ukwandisa amasevisi abo futhi esikhundleni, ngokwezinga elithile, amasevisi wezemidlalo umphakathi olunikezwa nguhulumeni.
Ngaphandle asekelayo ezemidlalo olulodwa kanye nenkampani, idokhumenti Kudinga futhi ubuhle umkhakha isakhiwo. Ingxenye inkonzo wemboni embonini ukhuthazwa ukuba avuswe. Oholela imfanelo amaqembu, imisebenzi, lezisekelo ezimbonini kanye amaphrojekthi kufanele yakhiwe sibeke isibonelo sokuthuthukisa umkhakha.
Izifunda ngezisetshenziswa semvelo esiyingqayizivele, kuhlanganise nehlathi, amanzi, amaxhaphozi, izintaba ezingwadule, bakhuthazwa ukuba bathuthukise ezemidlalo ethize ukuthi uvumelane nesimo sendawo, ukuze udale umkhiqizo wabo siqu.
Incwadi ebizwa ngokuthi i for ukwakhiwa ukuqina ezokungcebeleka izikhungo ngokwenza ukusetshenziswa ezindaweni ezisemadolobheni kuhlanganise Parklands, izikhala ezivulekile, isakhiwo kwezindlu kanye ezindlini - ngokudala ukuqina izikhala ngaphakathi ibanga imizuzu engu-15 '.
Ngaphezu kwalokho, wanxusa sisebenzisa inkundla imithombo ekhona, kuyashesha amabhizinisi kanye nezikhungo ukuvula ezemidlalo zabo izindawo umphakathi, nokugqugquzela izindawo izikole 'ukuze uhlale evulekile kweliklasi kanye amaholide.
Kunamaphuzu amaningana ekhethekile ukuqina zokungcebeleka izindawo ezifana entabeni futhi ongaphandle emakamu, ukungcebeleka imoto emakamu, izintaba kanye amagalaji ogibele Kufanele kwakhiwe, wathi idokhumenti.
Ukuthuthukisa ucwaningo, ukuthuthukiswa kanye nokukhiqiza umthamo sokufaneleka futhi imishini ukungcebeleka, uhulumeni wakhuthaza amabhizinisi, izikhungo ukucwaninga kwesayensi, kanye nezomphakathi ukuthi yakha cross-umkhakha nemifelandawonye nokusekelwa imishini ukuqina yokukhiqiza amabhizinisi ukunweba ibhizinisi labo ukuze inkonzo imikhakha, ukuqhuba kwezilwandle sihlangane futhi zigqila, ukwaziswa okumayelana nesisebenzisana nabo, nokuthuthukiswa ngokuhlanganyela.
Lowo Mbhalo wangonyaka we kuhlelwe ukusekela amabhizinisi ekuthuthukiseni imishini eyakhelwe izidingo ezihlukahlukene bobudala obuhlukahlukene, kanye nemishini yocwaningo kanye emngceleni ubuchwepheshe ezifana egqokenayo yezemidlalo kanye virtual imishini ngokoqobo ezemidlalo.
Ngesikhathi esifanayo, izinqubo-mgomo eziphathelene kumele kutsi tentiwe ncono ukunikeza lula kakhudlwana Ukuvikelwa amaqembu ahlukene ukuqina, popularize okwakwaziwa ososayensi ukuqina, ukuheha izimali zomphakathi ukutshala izimali zami kule umkhakha ezemidlalo, uqinise ukuqina ukuphathwa ithalente, kanye ukusungula inkonzo nenqubo kanye nekhwalithi ibhanela ukuqina zokungcebeleka wemboni e imigomo yesevisi, ukuqeqeshwa ngamakhono, ukuphathwa umsebenzi, ukwakhiwa kwengqalasizinda, futhi imishini yokukhiqiza.